Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Dalxiiska Hindiya oo ku hungoobay Heerka Qorshaha Cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • Investments • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
In kasta oo Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Hindiya (IATO) uu soo dhaweynayo ogeysiiska sii-deynta Adeegyada Dhoofinta Adeegga ee Qorshaha Hindiya (SEIS) ee hawl-wadeennada dalxiiska sannad-maaliyadeedka 2019-20, isla markaasna waa laga xumaaday in la dhimay ilaa 5 boqolkiiba laga bilaabo 7 boqolkiiba.
IATO waxay ku boorinaysaa dowladda inay dib u soo celiso dheeftii SEIS sidii ay ahayd sannadkii hore.
Waxaa la codsaday in la kordhiyo boqolkiiba 10, si kastaba ha ahaatee, waxaa la jaray boqolkiiba 2 halkii.
Hoos -u -dhaca boqolkiiba ilaa 5% waxay saamayn doontaa hawl -wadeennada dalxiiska ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyada oo la xidhayo Rs. 5 crores ayaa si xun u saamayn doonta hawlwadeennada dalxiiska ee waaweyn.
“Sannadihii iyo badhkii la soo dhaafay waxay ahaayeen mid ka mid ah wejigii ugu xumaa ee hawl-wadeennada dalxiiska, iyada oo la eegayo dhibaatada tabarta daran ee la soo maray, waxaa lagu boorriyay inay dawladdu soo celiso macaashka SEIS boqolkiiba 7 sidii la bixiyay sannad ka hor , ”Ayuu yiri IATO Madaxweyne Rajiv Mehra.
18 -kii bilood ee la soo dhaafay, hawl -wadeennada dalxiiska ee gudaha ku soo gala waxay lahaayeen dakhli zilch iyadoo dhowr ka mid ah ay isku laabanayeen meheraddooda. Iyadoo taas la eegayo, faa'iidada SEIS ayaa la sugayay muddo dheer, maadaama ay tani bixin doonto xoogaa kaalmo maaliyadeed ah oo gacan ka geysan doonta waaxda dalxiiska inay ka gudubto dhibaatadan coronavirus ee COVID-19.
Intii lagu guda jiray doodaha, dowladda waxaa laga codsaday inay kor u qaaddo boqolkiiba 10 iyadoo ah hal mar, hase yeeshe, hoos u dhigista faa'iidada iyo u dhigidda 5 crores waa niyad jab waxaana dowladda laga codsanayaa inay ugu yaraan kor u qaaddo boqolkiiba 7 oo ka saar daboolida Rs. 5 crores ugu yaraan dalxiiska iyo warshadaha soo dhoweynta.
"Waxaan ku rajo weynahay in dowladdu ay si wanaagsan u tixgelin doonto codsigeena," ayuu yiri Mr. Mehra.
Waa in la ogaadaa in hoos u dhaca boqolkiiba ilaa 5% ay saameyn ku yeelan doonto hawl wadeennada dalxiiska ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyada oo la dabooli doono Rs. 5 crores ayaa si xun u saamayn doonta hawlwadeennada dalxiiska ee waaweyn.
Dalxiiska ayaa wax weyn ku soo kordhiyay khasnadda wuxuuna ahaa shaqo bixiye weyn sidoo kale. Xaaladda murugsan ee sidan oo kale ah, waaxda dalxiisku waxay caawimaad ka raadisaa dawladda si ay u noolaadaan oo u soo noolaadaan.
Adeeggu wuxuu ka Dhoofiyaa Hindiya Qorshaha (SEIS) wuxuu ujeedkiisu yahay inuu kor u qaado dhoofinta adeegyada laga helo Hindiya iyadoo la siinayo dhibcaha warqadaha waajibaadka dhoofinta u qalma. Sida uu dhigayo qorshaha, bixiyeyaasha adeegga, ee ku yaal Hindiya, waxaa lagu abaal marin doonaa nidaamka SEIS, dhammaan adeegyada u -dhoofinta u -qalma ee Hindiya. Maqaalkan, waxaan si faahfaahsan u eegeynaa Dhoofinta Adeegga ee Hindida Hindiya.